XOG:Seddex arin oo laga ogaaday Kulanki Gunners-ka ay ku dubatay Man City » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ England/XOG:Seddex arin oo laga ogaaday Kulanki Gunners-ka ay ku dubatay Man City
Arsenal ayaa xalayto fariin cad dirtay ka dib markii ay 2-1 ku dubteen kooxda Manchester City, waxaana ay fariintaasi aheyd inay xilli ciyaareedkan u soo tafaxeyteen hanashada horyaalka Premier League, hadaba waxaan eegi doonaa seddex waxyaabood oo laga bartay kulankii xalayto ee Emirates Stadium.
1 Arsenal ayaa ugu cadcad hanashada horyaalka.
Mid ka mid ah xilli ciyaareedyadii ugu qariibsanaa islamarkaana aan la saadaalin karin waxa dhici doona ayuu Premier League ku jiraa xilli ciyaareedkan. Arsenal dabcan ma ahan kooxdii ugu fiicneyd abid, xitaa hogaanka uma hayaan horyaalka laakiin weli iyaga ayaa ah kooxda ugu cadcad inay hantaan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Leicester City waxa ay ahaayeen kuwa fantastik ah xilli ciyaareedkan iyadoo Jamie Vardy iyo Riyad Mahrez ay yihiin ciyaartoyda qaab ciyaareedka ugu fiican ku jirta horyaalka laakiin cidna ma aaminsana inay heystaan tayo ay ku hanan karaan horyaalka sidaasi darteed kooxda Arsene Wenger ayaa haatan ah kooxda ugu cadcad hanashada Premier League. Waxa ay heystaan xiddiga noqon karaa xidiga ugu fiican horyaalka ee Mesut Ozil ugu danbeyna waxa ay aamineen inay ku guuleysan karaan horyaalka.
Taas bedelkeeda, Manchester United waxa ay u sibxaneysaa gadaal gadaal, Liverpool waxa ay kuftay dhowr jeer, Chelsea xilli hore ayay baxday haatan Man City ayaa bilowday inay awoodi weyso inay qaab ciyaareed joogta ah soo bandhigo ama inay si fiican u difaacdaan labo kulan oo isku xigta. Kooxna kuma guuleysanin Premier League ka dib iyadoo laga badiyay shan kulan ka hor ciida gaalada ee Christmas, waana booska ay haatan City taagan tahay.
2 Petr Cech waxa uu muhim u yahay tartanka ay Arsenal ku jirto
Markii uu John Terry lahaa Cech waxa uu Arsenal ugu dhigmaa 15 dhibcood xilli ciyaareedkii, dad ayaa warkaas u qaatay wax la iska yiri gaar ahaan qaladaadkii uu ku bilowday xilli ciyaareedka. Laakiin Terry waa uu saxsanaa.
Sida uu Cech u difaacdo goolka iyo weliba sida uu u dhiirogeliyo daafaca ka horeeeya ayaa muhim weyn u ahaa Arsenal xilli ciyaareedka oo dhan, waxaana ay taasi mar kale soo muuqatay kulankii xalayto ee City.
Arsenal waxa ay u muuqatay kuwa isku dhex yaacay 10kii daqiiqo ee ugu danbeysay ka dib markii uu Yaya Toure goolka dhaliyay laakiin waxa ay shaaca ka qaadeen bir cusub iyo weliba aaminaad cusub tan iyo markii uu Cech yimid taasoo u sahashay inay seddexda dhibcood la baxsadaan kulan sidaas u weyn.
Goolhayihii hore ee Chelsea uma uusan baahneyn inuu badbaadino cajiib ah sameeyo xalayto laakiin wax walba uu sameeyay waxa uu ku sameeyay kalsooni iyo farsamo. Inay heystaan goolhaye hore ugu soo guuleystay horyaalka islamarkaana hore u soo garaacay kooxo waa weyn ayaa faa’ido weyn u ah Arsenal.
3 Yaya Toure waxa uu u baahan yahay in hore loo dhaqaajiyo.
Marka aad aragto goolkii uu Yaya Toure dhaliyay ee uu Manchester CIty ciyaarta dib ugu soo celiyay, waa qasab inaad ku fekertay sababta inta badan looga ciyaarsiiyo booska burburiyaha khadka dhexe marka ay City ka maqan tahay garoonkeeda.
Marka uu ku jiro qaab ciyaareedkiisa ugu fiican Toure waxa uu ku maquunin karaa koox kasta awoodiisa iyo aragtidiisa dheer, waxaana uu qalqal gelin karaa khad dhexe kasta oo laga horkeeno xitaa kooxaha khadkooda dhexe uu isku xiran yahay.
Laakiin markii aad dib u dejiso, kaliya tayadiisa lama qasaarinin laakiin qaabka kooxda ay u dhismeysa ayaa u muuqanaya mid qaldan. Marka uu booska burburiyaha khadka dhexe ka ciyaarayo waxa uu u muuqdaa mid saameyn yar marka loo barbardhigo marka uu hore aadayo.
Haddii ay City dooneyso inay si dhab ah ugu tartanto horyaalka waxa ay u baahan yihiin inay Toure hore u dhaqaajiyaan oo ay ka dhigaan xiddiga laga baqo ee kooxdooda.